Duqaymo kasocda Suuriya iyadoo Golaha Amaanku isku raacay xabad joojin – Radio Daljir
Duqaymo kasocda Suuriya iyadoo Golaha Amaanku isku raacay xabad joojin
Febraayo 25, 2018 4:55 b 0
Ciidamada dowladda Suuriya ayaa qaaday howlgal balaaran oo ka dhan ah xoogaga mucaaradka ee bariga magaalada Ghouta, saacado kadib go’aankii Golaha Amaanka ee QM uu ku codeeyey muddo sodon beri oo xabad joojin ah oo ka dhaqan gasha dalka Suuriya.
Xoogaga daacadda u ah madaxwaynaha Suuriya Bishaar Al-asad ayaa beegsaday saldhigyo dhowr oo ay lahaayeen mucaaradka oo ku dhow caasimadda Suuriya ee Dimishiq, iyadoona diyaaradaha dagaalka ay hareereeyen ilaa sideed saldhig oo ay mucaaradka joogaan.
Wariye katirsan Al-jaziira oo ku sugan gobolka Gaziantep ee dariska la’ah Turkiga ayaa sheegay inay ciidamada dowladda ay isku dayayaan inay hareereeyaan dhowr jiho oo ay mucaaradku fadhiyaan.
Qaraarka Golaha Amaanka ee QM
Golaha Amaanka ee QM ayaa si wadajir ah isku raacay xabad joojin sodon beri ah oo ka hirgasha Suuriya saacado kahor duqaynta ciidmda Bishaar Al-asad intii aanay bilaaban, codaynta Golaha Amaanka ayaa waxaa fududeeyey dowladaha Kuweit iyo Sweden, iyadoona muddo dhowr jeer ah dib u dhac uu ku yimid sababo dadaalo lagu qanacinayay dowlada Ruushka oo socday, iyadoona lagu qanciyay inay u hogaansato shuruudaha.
Kulanka ayaa lagu waday inuu qabsoomi Jimcihii horte, balse dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay awooda diidmada qayaxan ay kala hortagi doonto haddii qaraarka xabad joojinta la qaato.
Wakiilka gaarka ah QM ee Suuriya Steffan de Mistura ayaa ku nuux nuuxsaday kulan degdeg ah oo xabd joojin ah, si loo joojiyo waxa uu ku tilmaamay “Weerarada argagaxa ee bariga Ghouta iyo duqaynta madaafiic ee aan kala sooca lahayn.
Boqoqlaal kun oo shacab ah ayaa ku geeriyooday dagaalada Suuriya muddo todobo sano oo dagaal sokeeye uu ka socdo dalkaasi, halka malaayiin shacab ahna ay dalka ka barakaceen.
Raysal wasaare Xasan Khayre oo kusii jeeda Imaaraatka Carabta
Saaka & Dunida iyo Xuseen Madar, Daljir Bossaso (dhegayso)